यस्ता देखिन्छन् ‘ओमिक्रोन’ भाइरसका लक्षण,कसरी बच्ने ? – Health Post Nepal
यस्ता देखिन्छन् ‘ओमिक्रोन’ भाइरसका लक्षण,कसरी बच्ने ?
२०७८ मंसिर २० गते १५:५२
नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ पुष्टि भएको छ । दक्षिण अफ्रिकाहुँदै नेपाल भित्रिएका दुईजना विदेशी नागरिकमा संक्रमण देखिएको हो ।
ओमिक्रोन भेरियन्ट कति घातक छ रु खोपको प्रभावकारिता कति रहन्छ भन्ने अझै अध्ययनकै क्रममा छ । तर झण्डै ५० वटा म्यूटेसन देखिएकाले अरु भेरियन्टभन्दा घातक हुनसक्ने आशंका अध्ययनकर्ताहरुको छ ।
नेपालमा ओमिक्रोन पुष्टि भएसँगै निगरानीका लागि ‘सर्भिलेन्स तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग’ को कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। आम नागरिकलाई ओमिक्रोनसँगसम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्य प्रेषण गर्न विश्वमा भएका यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा प्राप्त सही सूचनाहरु आधिकारिक माध्यमबाट प्रवाह गर्ने गरिएको छ।’, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड १९ का अरू भेरियन्ट जस्तै ओमिक्रोनको संक्रमणबाट बच्न पनि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरुको पालना मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भीडभाड नगर्ने तथा हात धुने कार्य हावा आवतजावत राम्रो हुने स्थानमा बस्ने सुझाएको छ।
भाइरसबाट बच्न खोपको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने भएकाले सबैले मापदण्डको पालना गरी खोप अभियानमा सहभागी नहुनसमेत आग्रह गरेको छ।